I-Tapglue: Izixhobo ezinokwenziwa ngokwezifiso ukuJika iMveliso yakho kwiNethiwekhi yeNtlalontle. | Martech Zone
I-Tapglue: Izixhobo ezinokwenziwa ngokwezifiso ukuJika iMveliso yakho ibe kwiNethiwekhi yeNtlalontle.
NgoMgqibelo, Oktobha 17, 2015 NgoLwesibini, Agasti 18, 2020 Douglas Karr
I-Tapglue ikwenza ukuba wongeze umaleko lwentlalo kwi-app yakho kwisithuba seeyure, ekuvumela ukuba ugxile ekwenzeni amava omsebenzisi kunye nokukhulisa uluntu lwakho.
Ngomaleko wentlalontle kaTapglue kunye neplagi yethu kunye nokudlala ukondla iindaba, ungawasebenzisa amandla othungelwano oluxhunyiwe, uvumele abasebenzisi benze iiprofayili zabo, banxibelelane nabahlobo babo, kwaye bakhuthaze ukuzibandakanya okuphezulu.
Iimpawu zeTapGlue zibandakanya:
Iindleko zeendaba -Yakha iindaba zeendaba zentlalo eziqhuba ukugcinwa, ukuzibandakanya, kunye nokwenza umntu. Yenza amava anomdla wokujikeleza umxholo wakho okhoyo kunye nomsebenzi womsebenzisi. Ukuthandwa okwakhelweyo, izimvo, kunye nezabelo ziya kuqinisekisa ukuba umxholo wakho kunye nomsebenzisi wakho usasazekile. Bonisa izithuba zomsebenzisi, iminyhadala, imifanekiso, kunye nokunye ukwenza iindlela ezintsha zokubandakanya abasebenzisi bakho.
Iiprofayili zomsebenzisi -Yila uluntu ngokongeza iiprofayili zomsebenzisi kwimveliso yakho. Vumela abasebenzisi bongeze kwaye batshintshe imifanekiso okanye bavumelanise ne-Facebook. Yongeza naluphi na uhlobo lolwazi lweprofayile yomsebenzisi kunye nezinto ozikhethayo. Bonisa inani labalandeli okanye abahlobo. Veza ukutya okwenziwa ngumsebenzisi ukondla kunye namaxesha. Vumela abasebenzisi benze iibhukumaki, uluhlu lwezifiso, izintandokazi, uluhlu lokubukela, nokunye okuninzi.
Izaziso -Gcina abasebenzisi bethunyelwe malunga nokwenzekayo kwinethiwekhi. Chaza iminyhadala kunye nezaziso ofuna ukuzibonisa-nokuba zithanda ntoni, ukutshintsha umfanekiso okanye ukufumana umlandeli omtsha. Bonisa iibheji ezingafundwanga kwi-app okanye kwiscreen sasekhaya somsebenzisi ukuze kuphakanyiswe imisebenzi yoluntu kunye nokuqhuba ukugcinwa ngendlela efanelekileyo.
Abahlobo naBalandeli -Yila uthungelwano oluvulekileyo okanye lwabucala ukwenza igrafu enamandla yentlalo ejikeleze imveliso yakho. Khetha phakathi kwabahlobo okanye umlandeli womfuziselo wenethiwekhi yakho. Sebenzisa i-Facebook, i-Twitter okanye incwadi yeedilesi Fumana Abahlobo. Vumela abasebenzisi bakhangele abanye ukuze bafumane abantu abanokunxibelelana nabo.
I-Tapglue ngoku iyinxalenye yeUpland Localytics
tags: isondlo somsebenziukutya kwezentlaloukutya kwezentlaloityhubhuitapglue apiukutya kwe-tapglueityhubhu sdkitapglue imisebenzi yentlalo api